दाँत किराले खाएर दुखेको छ ? छुट्कारा पाउन यसो गर्नुस् ...
दाँत किराले खाएर दुखेको छ ? छुट्कारा पाउन यसो गर्नुस् ...
२०७६ श्रावण ३२ शनिबार १३:०१:००
दाँत स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैको लागि अति महत्वपूर्ण अंग हो । यसलाई स्वस्थ, सफा र सुन्दर राख्ने सबैको चाहाना हुन्छ । नचाहाँदा नचाहाँदै पनि विविध कारणले दाँतमा समस्या आउँछ । अधिकांशमा दाँतमा आउने समस्या मध्ये एक हो किरा लाग्ने र दुख्ने । दाँतमा किरा लाग्ने र दुख्ने किन हुन्छ रु यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन के गर्ने ?
दाँतमा लाग्ने रोगलाई हामी सामान्य रुपमा लिन्छौ । दाँत सुन्दरताको लागि मात्र हो भन्ने धेरैको सोचाई छ । तर बेलैमा उपचार नगरे दाँतमा लाग्ने रोगले क्यान्सरसम्म हुने गर्दछ । दाँत तीन तहले बनेको हुन्छ । चिकित्साशास्त्रमा पहिलो बाहिर देखिने सेतो भाग, जसलाई इनामेल भनिन्छ । इनामेल भन्दा भित्रको भाग डेन्टिन र डेन्टिन भन्दा भित्रको भाग जसलाई पल्प भनिन्छ । पल्प दाँतको सबै भन्दा कमजोर र संवेदनशील भाग हो जहाँ रक्तसंञ्चार हुन्छ । मुख भित्र विभिन्न किसिमका व्याक्टेरिया हुन्छन् । हामीले खाएको खाना दाँतमा बसिरहँदा त्यस्ता व्याक्टेरियाले एसिड उत्पन्न गर्छ र यसले बिस्तारै किरा लाग्न सुरु हुन्छ ।
दाँतमा किरा लाग्ने धेरै कारणहरु छन् । जस मध्य दाँतलाई फोहोर राख्नु वा खाना खाए पछि ब्रस नगर्नु । जिब्रो तथा मुख राम्ररी सफा नगर्नु । वंशाणुगत गुण आदिले किरा लाग्छ । दाँत सिरिङ्ग हुने । खाएको कुरा दाँतमा अडकने । दाँत दुख्ने । दाँतमा इनामेलको भाग हराएर कालो देखिने । चपाउन गाह्रो हुने लक्षण देखिएमा दाँतमा किरा लागेको हुनसक्छ । दाँतमा किरा लाग्न नदिन दाँत सफा राख्नु पर्छ । बच्चा उमेर देखि नै ब्रस गर्न सिकाउने । सानो बच्चालाई आमाको दुध वा केही पनि चिज खाएपछि सफा नरम कपडाले गिजा, दाँत सफा गरिदिने । कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक दन्त चिकित्सककोमा दाँतको परीक्षण गराउँदा यस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ । किराले खाए पछि दाँत दुखाई पनि हुन्छ । दुखाई कम गर्न धेरैले खैनी, ल्वांको तेल लगाएतका कुरा हाल्ने गर्छन् । यसले क्षणिक रुपमा समस्या समाधान भएको अनुभूति भएपनि दिर्घकालिन रुपमा भने समाधान हुँदैन ।
त्यसैले दिर्घकालिन समाधानको बाटो खोज्नुपर्दछ । किराले खाएको दाँतको प्रकृति अनुसार दाँत भर्नेदेखि निकाल्नेसम्मको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको बेलैमा उपचार नगरे गिजा तथा मुखको क्यान्सर समेत हुनसक्छ । यस कारण समय, खर्च र दुखाई कम गर्नका लागि पनि एक त किरा लाग्न नदिन सजक बन्नुपर्दछ र जतिसक्दो छिटो विशेषज्ञको सुझाव बमोजिम उपचार गराउनु उत्तम हुन्छ ।